Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A September 2010 (8)
Q and A September 2010 (8)
1. ကျွန်တော်က ASD ရှိဖူးပါတယ်
2. HIV ပိုးရှိသူတယောက်ဟာ
3. He is not sick, no cough
4. ဆီး မကြာမကြာ သွားနေရတာက
5. ကွန်ဒုံး အသုံးပြုပုံမှာ ဆက်ဆံပြီးလျင်
6. ပြည့်တန်ဆာနဲ့ ဆက်ဆံခဲ့ပြီး
7. HIV ဟာ ခန္ဒာကိုယ်ထဲကို ဝင်ရောက်ပြီးရင်
Sep 26, 2010 at 10:34
ကျွန်တော်က ASD ရှိဖူးပါတယ်။ ခွဲထားတာလည်း ၂ နှစ်လောက်တော့ရှိပါပြီ။ ကျွန်တော်က ညဘက် အိပ်ရေး ပျက်တတ်တော့ နှလုံးရောဂါနဲ့ ဘယ်လို ဆက်စပ်ပါသလဲခင်ဗျာ။ ASD က ပြန်ပွင့်နိုင်ပါလားခင်ဗျာ။ နောက်ပြီတော့ Masturbation က နှလုံးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသလား။
A: (ASD) ဆိုတာ Atrial septal defect ကို ပြောတာ ထင်ပါတယ်။ ခွဲထားပြီးရင် ကောင်းသွာတာပါ။ အပေါက် ဖြန်ဖြစ်တာ မရှိပါ။ အအိပ် ပျက်တာကြောင့် နှလုံးကို ရောဂါရလောက်အောင် မထိခိုက်တတ်ပါ။ Masturbation ဖြစ်ဖြစ်၊ လိင် ဆက်ဆံတာ ဖြစ်ဖြစ် နှလုံးအလုပ်၊ အသက်ရှူတဲ့ အလုပ်တွေကို သက်ရောက်ပါတယ်။ သက်ရောက်တယ် ဆိုပေမဲ့ နှလုံးရောဂါရှိသူ အိမ်ထောင်မပြုဘို့ ဆိုတာထက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ ကလေးမွေးတာမှာသာ ဂရုစိုက်ဘို့ ဆရာဝန်တွေက သတိပေးပါတယ်။ နှလုံးခုန်မြန်တာ၊ မောပမ်းတာ၊ ရင်တုံတာကိုသာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပြုနေပါ။ အလောမကြီး သတိကြီးရင် ဘယ်အရာကိုမဆို လူကောင်းလို နေနိုင်-ပြုနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ခွဲပေးတဲ့ နှလုံး အထူးကု-ဆရာဝန်ကဘဲ ပြောပြနိုင်ပါမယ်။
26 Sep 10, 17:42
Q: HIV ပိုးရှိသူတယောက်ဟာ ကျန်းမာရေး လိုက်စားလျင် သူ့သဘာဝ သက်တမ်းစေ့ နေထိုင်နိုင်ပါသလား။
A: HIV ပိုးရှိသူ ကျန်းမာရေး လိုက်စားတယ်ဆိုတာ သိပ်ယေဘုယျ ကြနေတယ်။ ဒီရောဂါအကြောင်း ကောင်းကောင်း သိအောင် လုပ်ပါ။ ဆေးစစ်နေရမှာ ပါတယ်။ ရှောင်စရာ-ဆောင်စရာတွေ ရှိပါတယ်။
24 Sep 10, 22:57
Q: He is not sick, no cough, no weight loss and no loss of appetite and then only found the mark in X-ray. Can it be decided it was TB?
A: Nowadays, TB becomes complex. A visibly strong man, an unexpected woman,anormal-looked child can be diagnosed TB. The parson can have one or two or all of Sputum test, X-ray, clinical exam positive. On X-ray, there are other non-TB lesions. Please consult Chest specialist.
24 Sep 10, 18:16
Q: ဆီးမကြာမကြာ သွားနေရတာက ဘာကြောင့်လဲဆရာ သွားရင်လဲ နည်းနည်းလေက များတယ် ညဘက်မှာတော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးဆရာ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါဆရာ။ အားလုံး နေကောင်းကြပါစေ။
A: ဆီးများတာက ရေ-အရည် သောက်တာ များလို့သာ မဟုတ်ဘဲ များတဲ့ အကျင့်လို ဖြစ်နေရင် ဆီးချို စစ်ပါ။ ဆီးချိုက သွားချင်တိုင်း ဆီးထွက်တာဘဲ။ မနာဘူး။ ညမှာပါ ထထ သွားရတယ်။ ဆီးလမ်း ပိုးဝင်ရင် ခဏခဏ သွားချင်တယ်။ ကြာတော့ ဆီးမရှိဘဲနဲ့တောင် သွားချင်နေတယ်။ သွားရင် နာမယ်။
24 Sep 10, 17:27
Q: ကွန်ဒုံး အသုံးပြုပုံမှာ ဆက်ဆံပီးလျင် လိင်တံ မပျော့ခင်မှာ ချွတ်ရမယ်လို့ ဖတ်ရပါတယ်။ မူလအနေအထား ရောက်မှ ချွတ်ရင် ဘယ်လို ဖြစ်တက်ပါလဲ သိချင်ပါတယ်။
A: သုတ်ရည်က မတော်တဆ ထွက်ကျပြီး မ အင်္ဂါထဲဝင်မှာ စိုးလို့သာ ဖြစ်ပါမယ်။ Orgasm ရပြီးတာနဲ့ ချွတ်ပါ။ မ-အင်္ဂါကနေ ထုတ်တော့မယ် ဆိုတာနဲ့ ကွန်ဒွန်ရဲ့အရင်းကို လက်နဲ့ ကိုင်နေရင်း ကျားအင်္ဂါကို ထုတ်ပါလို့ ပြောတာလဲ ဒါ့ကြောင့်ပါ။ ရောဂါ ကူးစက်စေမှာ စိုးလို့ပြောတာ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်တားဘို့ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
24 Sep 10, 16:26
Q: ပြည့်တန်ဆာနဲ့ ဆက်ဆံခဲ့ပြီး ဒီတိုင်းပဲ အလွယ်တကူ လက်နဲ့ပဲ အရင်းက လှန်ပြီး ခွာချွတ်ခဲ့ရင်ရော အန္တရာယ် ရှိနိုင်ပါသလား သိပါရစေ။
A: (ကွန်ဒွန်) ကို ချွတ်ရာမှာ နှစ်ယောက်လုံးက HIV ဘီပိုး၊ စီပိုး မရှိသူ၊ ကလေးခြာချင်လို့သာ သုံးသူတွေက လက်နဲ့ ကိုင်လို့ ရပါတယ်။ ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာ ဖြစ်စေ ကိုင်တဲ့သူလက်မှာ အနာအဆာ မရှိရင်လဲ လက်နဲ့ ကိုင်လို့ ရပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေး ပုံမှန် ဂရုစိုက်သူများကတော့ တစ်ရှူးနဲ့ ကိုင်ကြတယ်။
24 Sep 10, 16:33
Q: HIV ဟာ ခန္ဒာကိုယ်ထဲကို ဝင်ရောက်ပီးရင် နှစ်တော်တော်ကြာအောင် ရောဂါပုံစံတွေ မပြဘူးဆိုတာ အများဆုံး ဘယ်လောက် ကြာအောင် မပြပဲနေတာပါလဲ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် သိသလောက်ကတော့ ရောဂါဝင်ပြီးရင် 4–5 နှစ်ဆို AIDS ဖြစ်သွားပြီလို့ သိရပါတယ်။ အဲလို ရောဂါလက္ခဏာ မပြတဲ့သူ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိလဲ၊ ဗဟုသုတ အနေနဲ့ သိပါရစေ။
A: ခန္ဒာကိုယ်ထဲကို HIV ဝင်ပြီး ဘယ်လောက်ကြာမှ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပြသလဲဆိုတာ Clinical latency ခေါ်တယ်။ ၂ ပါတ် ကနေ အနှစ် ၂ဝ လို့ ဆိုပါတယ်။ စအိုကနေ ကွန်ဒွန် မသုံးသူတွေက တခါပြုတိုင်း ၃-၅% ဖြစ်စေဘို့ များလာနေတယ်။ ဗဂျိုင်းနာကနေ ကွန်ဒွန် မသုံးတာ၊ ပါးစပ်မှာ သုံးတာတွေထက် မြန်တယ်။ တကြိမ် ဆက်ဆံမှု ရှိပြီးနောက် ၂-၆ ပါတ်နေရင် အများစုက HIV antibody test positive ဖြစ်တယ်။ ၆ လနေရင် လူတိုင်းမှာ positive ဖြစ်တယ်။